Ra’isal wasaare Saacid oo sheegay inaysan waxba kala socon shirka maamul u samaynta Jubooyinka – Radio Daljir
Ra’isal wasaare Saacid oo sheegay inaysan waxba kala socon shirka maamul u samaynta Jubooyinka
Maarso 2, 2013 4:19 b 0
Muqdisho 02 March 2013 Ra?isal Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ?ayaa sheegay inaysan dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxba kala socon ? shirka ka socda magaalada Kismaayo islamarkaana aysan marna aqbalidoonin ?waxa ka soo baxa.
Ra’isal wasaare Saacid oo wareysi Gaar ah siinayay Idaacadda BBCda Laanteeda Afka Soomaaliga ayaa waxa uu sheegay in aysan ?dowladda Federaalku ?waxba kala socon shirka ka furmay magaalada Kismaayo kaas oo ?looga hadlayo Maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka.
Ra?isal Wasaaraha ayaa sheegay in Maamul aysan ?ka warheyn dowladdu uusan ?socon Karin sidaa daraadeed Qorshaha Maamulka loogu dhisayo Jubbooyinka aaney waxba kala socon dolwadda Federaalka Soomaaliya
.Ra?isal Wasaare Saacida ayaa dhanka kale Carabka ku dhuftay in qodabada Ka soo baxa Shirka Kismaayo aanu Hirgeli doonin dowladana aysan aqoonsan doonin.
Mudooyinkii danbe waxaa soo baxayey kala aragti duwanaan ku aadan qabsoomida shirka la doonayo in maamul loogu dhiso gobolada Jubooyinka,war ay dhawaan shaaciyeen gudiga qaban qaabada shirkaas ayaa waxaa ay ku sheegeen in ay u yeereen madaxda Dawladda Federaalka ee Soomaaliya.?
Magaalada Kismaayo ee xarunta Jubada Hoose ayaa maalintii labaad waxaa ka socda ?Shirweyne Maamul Loogu dhisayo Gobollada Jubbooyinka kaas oo ay wadaan siyaasiinta,aqoonyahamada iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolada Jubooyinka.
Madaxwayne Xasan Shiikh oo khudbad ka jeediyey kalfadhiga Baarlamaanka DF ee Soomaaliya
Wasiirada arimaha dibadda ee IGAD oo ku shiray Nayroobi